Deebisanii Qubachiisuu - UNHCR Egypt
June 2020 irraa eegalee UNHCR baqattoota haala mijaawaa, nageenya qabuu fi iccitii ta’een af-gaaffii gochuuf fedhii fi dandeettii qabaniif karaa viidiyoo/bilbilaan af-gaaffii Qubsumaa fageenya irraa gaggeessaa jira. Baqattoonni beellama af-gaaffii fageenya irraa qaban mirkaneeffachuu fi mirkaneessuu kan danda’an quunnamuun Infoline.
UNHCR baqattoota lakkoofsaan murtaa’an waajjiraalee isaa keessatti akka armaan gadiitti fudhachuu jalqabe:
• Baqattoonni af-gaaffiin isaanii fagoo irraa gaggeeffame dhimmi qubsiisuu isaanii osoo hin xumuramin dura waajjira UNHCR (Kaayiroo 6th of October ykn Alexandria) daawwachuun mirkaneessa dhumaa akka argatan beellamni ni kennamaaf.
• Baqattoota af-gaaffiin isaanii fageenya irraa gaggeeffamuu hin dandeenye. UNHCR beellama qubsumaa fi mirkaneessuu saganteessuuf iyyattoota dhuunfaan ni qunnama. Qubsumaaf beellama gaafachuun hin danda’amu.
Dhimmi qubsuma koo akkamitti dhiibbaa irra ga’a?
Yeroo kana keessatti UNHCR af-gaaffii qubsumaa gaggeessuu hin danda’u; haa ta’u malee, UNHCR haala dhimma dhuunfaa keessanii irratti odeeffannoo haaraa kennuudhaaf bilbilaan isin qunnamuu danda’a. Maaloo lakkoofsa bilbilaa amma qabdan UNHCRf kennuu keessan mirkaneessaa.
Yeroo ammaa sagantaaleen qubsumaa akka haqaman wanti agarsiisu hin jiru, haa ta’u malee, baqattoonni dhimmi isaanii biyya qubsiisuuf dhiyaate aangawoota biyya sanaan af-gaaffii osoo hin godhamin dura harkifannaa yeroo dheeraa jiraachuu danda’a. Yoo duraan biyya qubsumaatiin af-gaaffii si goote, murtoon dhimma kee irratti kennamu yeroo biraa caalaa yeroo dheeraa fudhachuu danda’a.
Baqattoonni gara biyyoota isaan qubachiisuuf yaada dhiyeessan akka imalaniif qophiin ba’uu hunda yeroodhaaf addaan citee jira. Deemsi qubsumaa hanga yoomiitti akka darbu hin beekamu. Yoo qubsiisuuf fudhatama argatte, UNHCR ykn IOM dafee imala kee qopheessuuf si qunnama.
Tajaajilli UNHCR fi IOMn kennamu hundi bilisaan kan kennamudha. Imalaaf ykn gargaarsaaf maallaqa akka kaffaltan yoo gaafatan, maaloo hatattamaan UNHCR beeksisaa.